VATOBE ENY AMPAMARINANA SY NY MANODIDINA : Handray fepetra mialohan’ny fahavaratra ny fanjakana
Hisy ny fepetra horaisin’ny fitondram-panjakana amin’ny fanesorana ireo vatobe ahiana hitera-doza eny amin’ny faritra Tsimialonjafy sy ny manodidina. 11 septembre 2019
Mialoha ny vanim-potoanan’ny fahavaratra no handraisana io fepetra io, hoy ny avy eo anivon’ny prefen’Antananarivo. Tsiahivina fa taorian’ireny loza nisesisesy teny amin’iny faritra iny izay dia mbola voasokajy ho faritra mena ny manodidina ny Tsimialonjafy sy Ampamarinana. Mbola misy vato mandondona sasantsasany ahiana hianjera mantsy eny amin’iny faritra iny raha toa ka misy orana mikija na horohoron-tany. Ireo rahateo no antony tsy nampirisihana ireo olona nipetraka teny an-toerana, notazonina vonjimaika tao amin’ny “Village Voara” Andohatapenaka, tsy hiverina eny amin’iny faritra iny intsony aloha.
Nanazava ny Jeneraly Angelo Ravelonarivo fa mbola an-dalana ny fitadiavana vahaolana maharitra ho an’ireo tra-boina teny an-toerana natoby ao Isotry. Fepetra vonjimaika ihany iny noraisina iny, hoy izy, ary misy ny fe-potoana nomena ireo tra-boina ireo ahafahany mipetraka ao amin’ny toerana nanatobiana azy ao Isotry. Voafetra io, araka ny fanazavana dia amin’ny 25 septambra ho avy izao no fe-potoana farany ahafahan’izy ireo mipetraka eny an-toerana. “Tsy hampirisika ireo tra-boina hiverina eny amin’iny faritra iny mihitsy ny fitondram-panjakana fa efa misy fepetra noraisina ka antenaina fa hivaha tsy ho ela io olana io”, hoy ny fanazavan’ny Jeneraly Angelo Ravelonarivo.